Hiriira mormii motummaan Shammarran Chibookii akka barbaaduu gafachuuf geggeeffame, Abujaa, Naayijeriyaa, Ebla 14, 2016.
Abbootiin dubara kanaa , magaalaa Imbalalaa keessa, lafa gabaa gaaddisaalee xixiqqoo jala taa’anii ijoollee isaanii durbaa eegan. Ijoollee durbaa 219, waggaa lamaan kana, mana-barnootaa isaanii, kan hawaasa Chibook keessaa garee Shororkeessotaa Naayijeeriyaa – Bookoo Haraamiinukkaamsamanii fudhataman keessaa, haalli warra ijoollee durbaa afurii kana fakkaata. Butiinsi ijoollee kanaa Bokoo-Haraamiin geggeessame, gochaa gara-jabinaa isa baay’ee hamaa ture. Guutummaa addunyaa irraa balaaleffannaa guddaa hordofsiisee, biyyoota michoota Naayijeeriyaa irraa illee barbaacha ijoollee durbaa kanaaf gargaarsa birmachiisee ture.
Humnoonni waraanaa fi aangawoonni siyaasaa Naayijeeriyaa, yeroo baay’ee akka ijoollee kana argachuu fi baraaruu danda’an waadaa seenaa turan.
Namni Yaawaalee Duuniyaa jedhaman kun, waa’ee dhabamuu mucayyoo isaa durbaa ennaa yaadu, akka nama lagdaan qabee ka qaamni isaa ollatu ta’uu dubbata.
Iddoon ijoolleen durbaa sun waggaa lama dura irraa butamanii fudhataman, manni-barnootaa sadarkaa lammaffaa ka mootummaa manca’ee, caccabaa lafa tuulame qofa lafa sana irraa mul’ata. Manni-barnootaa sun akka deebi’ee ijaaramuuf jecha, bakka sanaa jigsame. Garuu, haga ammaatti hin ijaaramne. Chibookii fi magaalaaleen naannawa sana jiran mana-barnootaa malee hafan.
Dhabinsi mana-barnootaa rakkoo magaalattiin qabdu keessaa tokko qofa. Hidhattoonni Bokoo Haraam naannawa sanatti deddeebi’uu itti fufanii jiran. Bara 2014 keessa illee yeroo gabaabaaf Chibookiin weeraranii turan. Baruma kana baatii Amajjii keessas, of-wareegdonni lafa gabaa magaalattii keessatti namoota 10 ajjeesan.
Uummata Chibook, keessumaa, maatiilee ijoollee durbaa sanaa irratti haalli mu’ataa jiru suukanneessaa dha. Waldaa Warra ijoollee durbaa jalaa ukkaamsamanii sanaaf dura-taa’aa ka ta’an Yaakubuu Inkeekii – eega ijoolleen durbaa isaanii jalaa fudhatamanii as, haadhaa fi abbaan ijoollee sanaa, walumaa-galatti namoota 18 tu du’e.
Imbalalaa keessatti maatiileen ijoolleen isaanii jalaa butamanii fudhataman, wal-arguudhaan wal-jajjabeessuu yaalan.
Jooseef Saandaa namni jedhamu ennaa hiriyoota isaa fi waahiloota isaa hojii waliin ta’u, waa’ee mucayyoo isaa dhabamtee sana yaaduu keessaa of baasuu akka danda’u, ennaa qofaa isaa ta’u garuu, yaadi isaa waa’ee ishee qofa akka ta’e dubbata.
Maatiileen ijoollee durbaa sanaa irra-jiriin naannawa sana irraa dheessanii jiran. Garuu, magaalaa guddoo kutaa sanaa Mayidguurii keessa qubatanii jiran. Haalli ijoollee durbaa isaanii maal akka ta’e beekuu dhabuun akkuma sammuu isaanii dhiphisetti jira.